बेवास्ता नगरौं जलबिन्दुका लक्षणलाई
आज : २०७५ माघ ३ बिहीबार / 17th January, 2019 [email protected]
डा इन्दिरा पौडेल, जलबिन्दु विशेषज्ञ
कहिलेकाहीँ प्रकाशमा हेर्दा इन्द्रेणीजस्तो देखिने, टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, धमिलो देखिनेजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । यस्ता लक्षण देखिए निको भइहाल्छ नि भनेर बेवास्ता गर्नुु हुँदैन । आँखामा लाग्ने रोग जलविन्दुका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ ।
के हो जलबिन्दु ?
मानिसको स्वस्थ आँखामा एक प्रकारको तरल पदार्थ (एक्युस ह्युमर) उत्पन्न हुन्छ । यदि, यसको उत्पादन या प्रवाहमा अवरोध आयो भने आँखाको गेडीभित्र थुनिन्छ र आँखामा दबाब बढ्न थाल्छ । यो दबाबले आँखाले मस्तिष्कमा संकेत पठाउने नसालाई नष्ट गर्छ । यो नसा संवेदनशील भएकाले अलिकति दबाब पर्दा पनि यसले काम गर्न छोड्छ । जसले गर्दा दृष्टि कमजोर हुन्छ । समयमै उपचार भएन भने सधैंका लागि दृष्टि गुम्न पनि सक्छ ।
एकपटक दृष्टि गुमिसकेपछि फर्काउन गाह्रो हुन्छ । यो रोग सामान्यतः ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिमा लाग्छ । तथ्यांक अनुसार यो रोग १ सय जनामा २ जनालाई लाग्छ ।
जलबिन्दु हुने कारण
– उच्च माइनस तथा प्लस पावरको चश्माको प्रयोग
– आँखाको चोटपटक
– आँखाको औषधि आफूखुशी प्रयोग
कुनै मानिसमा भने लक्षणबिनै यो समस्या देखिन्छ । केहीमा भने एक्कासी आँखाको प्रेसर बढ्दा आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने, आँखा रातो हुने, आँखा देख्न नसक्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । कुनै व्यक्तिमा प्रेसर बढे पनि सुरुमा थाहा हुँदैन । तर, अत्यधिक प्रेसर बढेपछि टाउको दुख्ने, धमिलो देखिने, प्रकाशमा हेर्दा इन्द्रेणीजस्तो देखिने हुन्छ ।
रोग पहिचान गर्न गाह्रो हुने भएकाले धेरै मानिस दृष्टि गुमिसकेपछि मात्र अस्पताल आउने गर्छन् ।
आँखाको प्रेसर १४ देखि २० सम्मलाई नर्मल मानिन्छ । तर, यत्तिकैमा ढुक्क भने हुन सकिँदैन । आँखाको प्रेसर नर्मल देखिएका व्यक्तिमा पनि जलबिन्दु रोग लाग्न सक्छ ।
जलबिन्दु २ प्रकारका हुन्छन्ः
१. क्लोज एंगल (बन्द कोण)
२. ओपन एंगल (खुला कोण)
आँखाको चाप बढाउने अन्य कारण पनि हुन्छन् । जस्तै, मधुमेह, थाइराइड ग्रन्थीको अल्पविकास, आँखामा चोटपटक, आँखाको कुनै शल्यक्रिया आदि । वंशाणुगत कारणले कुनै बच्चा जन्मँदा नै जलबिन्दु भएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आँखाको पानी जम्ने बाटो पूर्ण रुपमा विकास नभएको हुन्छ ।
क्लोज एंगल जलबिन्दुलाई उच्च दूरदृष्टि भएका मानिसलाई हुन्छ । खासगरी पुरुषभन्दा महिलालाई बढी यो रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ ।
ओपन एंगल जलबिन्दुमा आँखाको चाप बिस्तारै बढिरहेको छ भने स्नायुहरु पूर्णरुपमा क्षति हुँदासम्म कुनै लक्षण देखिँदैन । यस्तो बिरामीले केही अँध्यारोमा हेर्दा भने आफ्नो दृष्टि क्षय भएको थाहा पाउँछन् र चम्किलो बत्तीमा आँखा बढी संवेदनशील हुन्छन् ।
जन्मजात जलविन्दुका लक्षण
यदि, बच्चाको आँखाको आकार सामान्यभन्दा बढ्दै आइरहेको जस्तो लागे, धमिलो हुने, आँशु बगिरहने, उज्यालोमा खेल्न नसक्नेजस्ता लक्षण देखिए बाबुआमाले तत्काल डाक्टरकहाँ पुर्‍याउनुपर्छ ।
कस्ता मानिसलाई जलबिन्दु हुने खतरा हुन्छ ?
– ४० वर्षभन्दा बढी उमेर भएमा र नियमित रुपमा आँखाको परीक्षण नगराएको भएमा,
– परिवारमा कसैलाई जलबिन्दु भएमा,
– मधुमेहको समस्या भए या उच्च अदूरदृष्टि भएमा,
– लामो समयदेखि स्टेरोइड समूहका औषधि प्रयोग गरिरहेमा, आदि ।
आँखाको पानीको बहावलाई बढाउने अथवा घटाउने खालका उपचार गर्न सकिन्छ । तर, उपचारहरुले गुमिसकेको दृष्टि भने फर्काउन सक्दैन । पहिलो चरणको उपचार भनेको ‘बेटा ब्लकर्स’ थोपा औषधिको प्रयोग हो, जसले एक्युसको उत्पादन मात्रालाई घटाउँछ । अर्को विकल्प प्रोस्टाग्लान्डिन, एनालोगोस, पाइलोकार्पिनजस्ता आँखामा लगाउने थोपा औषधि हुन्, जसले आँखाको पानीलाई बढी मात्रामा बग्न मद्दत पुर्‍याउँछन् । यदि, कुनै पनि थोपा औषधिले पानी बग्ने मात्रालाई राम्ररी घटाउन या बढाउन सकेन भने शल्यक्रिया नै आवश्यक पर्छ ।
यस विधिअन्तर्गत आँखाको नानी र आइरिसको संयोगस्थलमा विकीरणले मसिना प्वालहरु बनाइन्छ । यसो गर्नुको उद्देश्य एक्युसको बहावलाई बढाउन सकियोस् भन्ने हो । ओपन एंगल जलबिन्दुमा विकीरण उपचार गरिन्छ । क्लोज एंगल जलबिन्दुमा भने ‘पेरिफेरल इरिडेक्टोमी’ गरिन्छ । त्यसै भागबाट एक्युसको बहाव पर्याप्त हुन्छ ।
शल्य उपचार विधिलाई ट्रावेक्युलेक्टोमी भनिन्छ । यसअनुसार शल्यक्रिया गरी पानी बग्ने कृत्रिम बाटो बनाइन्छ ।
Swasthya Khabar Patrika
तलको उत्तर दिनुहोस
१. डा केसी र चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे कांग्रेस नेता गगन थापाको पत्रकार सम्मेलन [लाइभ]
२. माफियाको आत्मस्वीकृति: कुर्न गाह्रो हुँदो रहेछ (कविता)
३. नर्सिङ सङ्घले ल्यायाे विपद्का समयमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिने 'मोबाइल एप्स'
४. छानबिन समिति गठन भएपछि सगरमाथा अञ्चल अस्पतालकाे तनाव साम्य, शवको पोष्टमार्टम धरानमा गराइने
५. जनकपुर अस्पतालको दुरावस्था : भेटिँदैनन् चिकित्सक, मारमा बिरामी
६. स्वास्थ्यमा तहगत प्रणाली र कानुनी व्याख्या
७. डा केसीको स्वास्थ्यमा ९ समस्या : शरीरमा हानिकारक रसायन बढ्दै, मिर्गौलाले जुनसुकै समयमा काम गर्न छाड्न सक्ने
८. Exclusive: विदेशमा गैरकानूनी लगानी गर्नेमा दुई डाक्टर सहित ५५ नेपाली
९. विपदमा स्वास्थ्य स्थितिबारे तथ्याङ्क संकलन गर्न मोबाइल एप
१०. स्वास्थ्य सहायकको आन्दोलन र समाधान
१. नेपालमा ६० जना पुरुष नर्सिङ पढ्दै (कुन कलेजमा कति?)
२. अब अनसन बस्नुपर्दैन भनेर डा केसीलाई जुस पिलाउने सुवास नेम्वाङ के भन्छन्?
३. स्वास्थ्य सहायकको आन्दोलन र समाधान
४. यसरी खोज्न सकिन्छ एचए र सिअहेवबीच देखिएका समस्याको समाधान
५. स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी अन्य मन्त्रालयका सचिव हुनसक्ने
६. 'र्‍याम्प शो'मा क्यान्सर जितेकाहरुकाे उमंग [फोटो फिचर]
७. एचए र प्रहरीबीच झडप : उपाध्यक्षसहित दुई घाइते, १० जना हिरासतमा
८. मेरी उनी, जुम्ल्याहा सन्तान र कान्ती
९. टिचिङमा जटिल शल्यक्रिया : कलेजोमा पलाएको ५ केजीको ट्युमार निकालियो
१०. यी व्यक्तिले दिएका हुन् एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव
डा. सुवास प्याकुरेल
© २०१८, सर्वाधिकार स्वास्थ्यखबर डट कममा .
Site by: i-Tech Nepal